Kuvaka Nheyo Yekutengesa Kwezuva - Forex Lens
zvose 4 /Inowirirana Live Session 0 /EURUSD 0 /Forex Education 0 /Forex Kukurudzira 0 /Forex anonongedzera 0 /Forex Kutengesa Kuongorora 0 /Forex Kutengesa Blog 0 /kutanga 4 /Zviratidzo 0 /Urarame Bhuku Rekushandisa 0 /akakwanisa Accounts 0 /Musika Dzidzo 3 /Musika Pfungwa 0 /Media 0 /nhau 0 /Technical Analysis 0 /Uncategorised 0
Chinhu chekutanga chandinofarira kuudza vanhu vanofarira nyika yekutengesa ndechekuti iwe unofanirwa kutanga watora hwaro hwakasimba hwezivo usati wambofunga nezvekuisa yako yekutanga yekutengesa. Mupfungwa dzangu izvi zvakakosha. Iri indasitiri yehaki uye piranhas iri kutsvaga nyore kutora. Sehove diki dzinokurumidza, kushambira mumvura idzi kunogona kutsausa. Chinhu chimwe chete kutasva nemahove, ndechimwe chinhu zvachose kana paine ropa mumvura kana ukabata kukweva kwangu. Kutaura nezvegungwa, nyika yekutengesa pachayo yakaita senge tsime risina ruzivo, iro iro pasi rinongobviswa nevashoma kwazvo veCousteau's. Zvandiri kureva kuti ndezvekuti pane ruzivo rusingaperi rwunogona kuunganidzwa pamusoro pehupenyu hwese, uye zvakadaro hunyanzvi hwekutsvaga uku kuri kudzikisa ruzivo urwu pasi kune hwaro hwakanyanya fomu uye kurishandisa pariri. Izvi zviri nyore kutaura pane kuzviita. Kuti usvike ipapo, unofanirwa kutanga wadzidza kwete zvekutanga chete, asi nechengetedzo zvinhu zvakare. Tora izvi kutsvaga sezvaunenge uchiwana chako chekuchengetedza chitupa. Iwe unofanirwa kuziva nezvengozi dzako kutanga usati wagona kuponesa mumwe munhu, senge pasina moto, hapana waya, hapana gasi, kana girazi. Mune dzidziso kana iwe uchikwanisa kununura mumwe munhu, unogona kudzivirira njodzi iwe pachako. Izvi zvakakosha pakutengesa. Iwe unogona kutokwanisa kushambira nema shark rimwe zuva kana iwe uchiziva zvauri kunyatso kuita. Ndiwo mashambadziro anoita kupenga.
Imwe nzira yekufunga nezvayo ndeyekuti iwe haugone kuvaka imba isina hwaro hwakasimba.
Kubva chaipo paKashata
Imwe yeanokwezva mazhinji ekutengesa ndeyekuti iwe unogona kuita mari yakawanda. VaFerrari, vanokurumidza vakadzi, vakapfuma fodya. Unogona kuva nazvo zvese! Ichokwadi vashoma vanosvika panhongonya dzekubudirira, uye ichokwadi pane chero kutsvaga. Izvo zvisingaiti zvakadaro zvinotengeswa semhedzisiro yekungotora kosi yangu. Wese munhu ari kuzviita. Haudi here kuita mari?
Chinhu nekutengeserana ndechekuti, munhu wese anogona kuitirwa kunyengedzwa kwekuita mijenya nemari yakawanda. Vashambadziri vanoziva izvi uye ivo capitalize zvizere pamusoro pfuma kupfuma nekukurumidza zviroto zvevakawanda. Asi uyu murangariro ndewe, sekuti chero munhu mukuru mushambadzi achakuudza, nzira yekuparadza. Naizvozvo kwakakosha kuwana mhando yeruzivo neruzivo, uye kunyatsoziva zvakanaka kubva zvakaipa kunouya chete neruzivo. Unogona kupfupisa danho iri nekutsvaga munhu anobatsira anogona kuratidza kukunda chaiko kuti iwe udzokorore (SaRP muKutengesera Kamuri. Pakupera kwezuva asi, zviri kwauri kuti uvandudze yako yega inoshanda iwe, uye izvo zvinotora nguva.
Turtle rinorova Hare
Nguva pfupi yadarika ndakatarisa iyo firimu ichangoburwa Ford vs. Ferrari. Ini handingape zvakanyanyisa chiitiko, asi chepakati pefirimu yaive pfungwa yekuti nyeredzi mutyairi Ken Miles ndiye ega aigona kutyaira itsva Ford GT40 mujaho wekumhanyisa mota kurova Ferrari paRe Mans mujaho. Ini ndinoda kufunga kuti mukutengeserana, hapana majaha maviri akaenzana, uye munhu wese achazove akasiyana masaradhi. Chinhu chakakosha kwete kurova vamwe vako vaunokwikwidza, asi kwete kuparara. Kuti uite izvozvo, hausi kumhanya navo, uri kumhanya iwe. Nekudaro, ini ndinofunga kuti mufananidzo wekare weiyo turtle uye hare inonyanya kushanda kutengeserana. Iwe unozongosvika pamberi nekutora zvinhu zvishoma. Izvi hazvisi ford vs Ferrari shure kwezvose. Iwe unofanirwa kugona iyo track kumhanya kwako wega uye kutora zvinhu zvishoma uye zvakatsiga kunokuchengetedza iwe. Turtle inorova hare.
Kudzokorora ndiye baba weese kudzidza
Chinhu chakakoshesa pakudzidza kutengeserana kana iwe wavaka hwaro hwezivo uye nekugadzira hurongwa hwakavhenekerwa nedanho rehuwandu - chinhu chatisina kutaura nezvacho pano, chiito chekuita tsika. Tiri kutaura 'bout tsika! Pane musiyano pakati pemaitiro akanaka, neakaipa. Iwe unofanirwa kukudziridza kurira, kwakanyatsofungidzirwa kunze maitiro iwe aunogona kudzokorora kakawanda nekudzokorora kusvikira vaita wechipiri hunhu. Kutengesa chiitiko, uye kuita kunoenderana neizvozvo. Kuti ugone kuita padanho repamusoro unofanirwa kudzidzira padanho repamusoro. Iwe haufanire kumbogutsikana. Uropi hwako itsandanyama, uye unofanira kuridzidzisa senge chero rimwe boka remhasuru, kuburikidza nekudzokorora. Vakuru vacho vanogara vari munzvimbo yekurovedza kusati kwaedza. Kutengesa hakuna kusiyana.
Vimba neyemhando yepamusoro
Kusvika pane kwaungaenda kuti uvake hwaro hwekuziva, internet yakazara neruzivo. Zano rangu kwauri, nderekutangisa neyemhando yepamusoro uye uzvivake pese paunoda zvakadzika zvido zvako. Ini ndingadai zvakadaro kukurayira kuti ukande mambure wakakura pakutanga, uye udzikise tarisiro yako paunenge uchienderera mberi. Zvino chienda ubudirire. Kana iwe uchinge uine chero dambudziko rekutanga unzwe wakasununguka kundibata neni kana kusiya ruzivo rwako mufomu iri pazasi uye ini ndichasvikira kwauri zvakananga.
Ndiani Op-Ed & Forex Lens
Op-Ed mutambi anoshingairira uye mudzidzi wezvinhu zvese hupenyu, aine pfungwa yakafemerwa yebasa kubatsira vamwe kuzadzisa zvinangwa nezviroto zvavo. Ed ane makore manomwe ezvemari nekutengesa ruzivo, ivo vese vachishanda parutivi rwevatengesi, pamwe nekutengesa kweprop uye mukutsigira kwekutengeserana. Akashandawo sehunyanzvi wemabhizimusi emakambani emari uye anotarisa zvakanyanya paGoridhe, iyo S&P uye Forex. Ed ari kufarirawo kutanga kuraira vadzidzi zvakanyanya nenzira, sezvaakaita zvisina kurongwa pamusoro pemakore. Iye anogara aripo kutaura shopu.
Ndifonere kana nditumire chat ikozvino kana uchida kudzidza zvakawanda nezvekuti ungatanga sei kutengesa!
kana kutanga ne Forex Kutengesa Kamuri!
GBPAUD uye US Oiri Pundutso, Pakupedzisira Nguva Kupfupisa AUD? +400 Pips Yakagadzirwa Iine Imwechete Yekurasikirwa Yekutengeserana!